The World of Moe Thanzin: November 2009
ဒီနေ့ အိမ်မှာကြေးအိုးချက်စားဖြစ်တယ်... ကျွန်မတို့လင်မယားက ကြေးအိုးဆိုရင် နေ့တိုင်းလည်းစားနိုင်တယ်လေ... ရန်ကုန်မှာတုန်းကဆို မစားဖူးတဲ့ နာမည်ကြီးကြေးအိုးဆိုင် မရှိသလောက်ပဲ... YKKO ရွှေယုန်လေး ရွှေနဂါး ယူဂျီးနီးယား ရွှေတောင်တန်း ကြေးအိုးဘုရင် အောင်မြင့်မိုရ် ဆိုင်တွေစုံအောင် စားဖူးတယ်... ဒီမှာကျတော့ ကြေးအိုးဆိုင်ကောင်းကောင်းလဲ မရှိတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ချက်စားဖြစ်တာများတယ်လေ... ချက်ရတာလဲ သိပ်မခက်လှဘူးဆိုတော့ ခဏခဏချက်စားဖြစ်တယ်... ချက်နည်းလေးလဲ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်... လုပ်စားကြည့်ကြပေါ့နော်....
၀က်ရိုးကို ညကတည်းက၀ယ်ပြီး ဆား သကြား အချိုမှုန့်တွေထည့်လို့ မီးနည်းနည်းနဲ့ ပြုတ်ထားရပါတယ်.... ၀က်သားကြိတ်ထားတာကို ဆား သကြားနဲ့ ကြက်ဥအကာတို့ထည့်ပြီး နှပ်ထားလိုက်ပါ... အူချိုကို မခါးအောင် ဆီနည်းနည်းထည့်ဆေးပြီး ပြုတ်ထားရပါမယ်... အူမကြီးနဲ့ နှလုံးကိုလည်းပြုတ်ထားပေးပါ... အသည်းကိုတော့ ခပ်ပါးပါးလှီးပြီး ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူထဲ ခဏထည့်ပြီးပြန်ဆယ်ထားပါ... အသည်းက အကြာကြီးပြုတ်ထားရင် မာသွားတတ်တယ်လေ... ငုံးဥလည်း ပြုတ်ပြီးအခွံခွာထားရပါမယ်... နောက်ထပ်အရေးကြီးတာကတော့ မုန့်ညင်းစိမ်းပါ... အဲဒီမုန်ညင်းစိမ်းမပါရင် ကြေးအိုးနံ့ မရတော့ပါဘူး... NTUC မှာရှိတတ်ပါတယ်... Da Chai လို့ခေါ်ပါတယ်...
စားခါနီးကျရင် ၀က်ရိုးပြုတ်ရည်ကို တစ်ပွဲစာထည့်ပြီး တည်ထားပါ... ဆူလာရင် ၀က်သားနှပ်ထားတာလေးကို လုံးပြီးထည့်ပါ... ကလီစာတွေကိုလည်း ထည့်ပြုတ်ပါ... ဆား သကြား အချိုမှုန့် လိုသလောက်ထည့်ပါ... ရေစိမ်ထားတဲ့ ကြာဆံကိုလဲ ထည့်ပြုတ်ပါ... ကြာဆံနူးခါနီးရင် ငုံးဥ မုန့်ညင်းစိမ်းနဲ့ ကုဆိုင်ထည့်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ... ကြေးအိုးဆီချက်ကြိုက်ရင်တော့ အရည်စစ်ပြီး ဆီချက်လေးချက်ထားတာရယ် ပဲငံပြာရည်လေးရယ်နဲ့ နယ်စားယုံပါပဲ... စစ်ထားတဲ့အရည်ကိုတော့ ငရုတ်ကောင်းလေးထည့်သောက်ပေါ့...
အချဉ်ရည်ကတော့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း ထောင်းထားတာကို Chilli Sauce နဲ့ ဖျော်လိုက်ယုံပါပဲ... ကဲ သုံးဆောင်သွားပါဦးနော်....
ဒါကတော့ ကျွန်မစားတဲ့ အရည်သောက်လေးပါ... သားဖေဖေစားတဲ့ဆီချက်တော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ မမှီလိုက်ဘူး...
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 5:42 PM9comments:
မိဘဆိုတာ ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေကို ကျန်းမာရွှင်လန်းနေတာပဲ အမြဲမြင်ချင်တတ်ကြတာ သဘာဝပါ... ကိုယ့်သားသမီးလေးများ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင် စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲရတာလဲ မိဘတွေပဲပေါ့...
ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကိုမှ သယ်ဆောင်ပျံ့ပွားစေတဲ့ ခြင်တွေကတော့ မိဘတွေအတွက် အကြီးစားရန်သူပေါ့... သန့်ရှင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒီစင်္ကာပူမှာတောင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ လုံးဝပပျောက်အောင် တိုက်ဖျက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး... အဲဒီတော့ သယ်ဆောင်သူခြင်တွေကို နှိမ်နင်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်...
ခြင်နှိမ်နင်းရေးနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး အရမ်းလွယ်ကူတဲ့နည်းလေးတစ်ခု email ကတဆင့် ဖတ်လိုက်ရလို့ ဘာသာပြန်ပြီး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်... ခြင်တွေကိုနှိမ်နင်းဖို့က ခြင်ဥတွေကို ပိုးလောက်လန်းဘ၀တောင် ရောက်ခွင့်မရအောင် ဖျက်စီးပစ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့... ခြင်ဥတွေက ရေထဲမှာရှိနေတတ်တာမို့လား... ဘုရားပန်းအိုးတို့ စားပွဲတင်ပန်းအိုးတို့ကတော့ ခြင်တွေရဲ့ ဂေဟာပေါ့...
ဒီနည်းလေးက လွယ်သလောက် ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာပါသေးတယ်... စင်္ကာပူပိုက်ဆံ 1 cent coin လေးတွေကို သိကြမှာပေါ့... ကြေးနီ (copper) နဲ့လုပ်ထားတာလေ... အဲဒီ copper coin လေးတွေကို ခြင်မပေါက်ပွားစေချင်တဲ့ ရေထဲမှာထည့်ထားလိုက်ယုံပါပဲ... copper ကထွက်လာတဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုးက ခြင်ဥတွေကိုပျက်စီးသွားစေပါတယ်... စင်္ကာပူမှာ နေတာမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အခြား copper coin လေးတွေ ရှာကြည့်ရမှာပေါ့... (ရှာရများခက်မလားပဲ)... ဒီရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလေးက ဘာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှလည်း မရှိနိုင်တာမို့ စမ်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်လားနော်... ကျွန်မလည်း ပြားစေ့လေးတွေ ပြေးရှာလိုက်ဦးမယ်.... အားလုံးအတွက်လဲ အသုံးဝင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်....
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 5:42 PM3comments:
တစ်နှစ်တာဆိုတဲ့အချိန်ရဲ့ တန်ဖိုးကိုသိချင်ရင် စာမေးပွဲကျလို့ နောက်တစ်နှစ်ပြန်တက်ရတော့မယ့် ကျောင်းသားကိုမေးပါ....
တစ်လတာအချိန်ရဲ့ တန်ဖိုးကိုသိချင်ရင် လမစေ့ခင် တစ်လစောမွေးပြီး ပေါင်မပြည့်တဲ့ကလေးလေးရဲ့ မိခင်ကိုမေးပါ...
ရက်သတ္တပါတ်တစ်ပါတ်ရဲ့ တန်ဖိုးကိုသိချင်ရင် အပါတ်စဉ်ထုတ် သတင်းဂျာနယ်ရဲ့ အယ်ဒီတာကိုမေးပါ...
တစ်နာရီဆိုတဲ့အချိန်ရဲ့ တန်ဖိုးကိုသိချင်ရင် ချစ်သူနဲ့တွေ့ဖို့အတွက် မျှော်လင့်တကြီး စောင့်မျှော်နေသူကို မေးပါ...
တစ်မိနစ်အချိန်လေးရဲ့ တန်ဖိုးကိုသိချင်ရင် ရထားလွတ်သွားတဲ့သူကိုမေးပါ... (တစ်မိနစ်နောက်ကျသွားပြီ.. ရထားကြီးထွက်လို့သွားပြီ..)
တစ်စက္ကန့်လေးရဲ့တန်ဖိုးကိုသိချင်ရင် မတော်တဆမှုကနေ လက်မတင်လေးလွတ်သွားသူကို မေးကြည့်ပါ...
တစ်စက္ကန့်ရဲ့ တစ်ထောင်ပုံတစ်ပုံအချိန်လေးရဲ့ တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်တော့ အိုလံပစ်ငွေတံဆိပ်ဆုရှင်ကို မေးကြည့်လိုက်ပါ....
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 8:12 PM2comments:
"သခွားရည်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ပင်တိုင်စံမိတ်ကပ်ကို နာမည်ကြီးလွန်းလို့လိမ်းကြည့်လိုက်တော့ အရမ်းအရမ်းကို ကောင်းတာပါပဲရှင်" ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာလေးကို မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါရဲ့.... ကြော်ငြာခောတ်ဦးတုန်းက အန်တီခင်သန်းနုရဲ့ ကြော်ငြာလေးပေါ့... ပင်တိုင်စံမိတ်ကပ်ရဲ့အကြောင်းတော့ မသုံးဖူးလို့မသိပေမယ့် သခွားသီးရဲ့အစွမ်းလေးကိုတော့ လိုအပ်ရင်သုံးလို့ရအောင် အားလုံးအတွက် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်...
သခွားသီးတစ်လုံးထဲမှာ ကျွန်မတို့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်... ဗီတာမင် B1, B2, B3, B5, B6 ဖောလစ်အက်ဆစ် ဗီတာမင်စီ ကယ်လစီယမ် သံဓာတ် မဂနီစီယမ် ဖော့စ်ဖရပ်စ် ပိုတက်စီယမ်နဲ့ ဇင့်တို့ပေါ့...
နေ့လည်နေ့ခင်း အလုပ်ထဲမှာ ပင်ပန်းပြီး ငိုက်နေပြီဆို ကဖင်းပါတဲ့ ကော်ဖီ လက်ဖက်ရည်တွေ သောက်မယ့်အစား သခွားသီးနည်းနည်းလောက် စားကြည့်လိုက်ပါ... သခွားသီးထဲမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်တွေက သင့်ကို ချက်ချင်းလန်းဆန်းသွားစေပါလိမ့်မယ်...
ရေနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးပြီးတိုင်း ရေချိုးခန်းမှန်မှာ ရေငွေ့တွေရိုက်နေတတ်တာကို စိတ်ပျက်နေပြီလား.... သခွားသီးကို အကွင်လိုက်လေးလှီးပြီး မှန်ကိုတိုက်လိုက်ပါ... ရေငွေ့တွေမရိုက်တော့တဲ့အပြင် မွှေးရနံ့သင်းသင်းလေးတောင် ပေးပါလိမ့်ဦးမယ်....
အပင်စိုက်ဝါသနာပါသူအတွက် အပင်ဖျက်ပိုးတွေက ရန်သူတွေပေါ့... သင့်စိုက်ခင်းလေးမှာ ပိုးတွေကျနေရင် သခွားသီးကွင်းလေးတွေကို ဒန်ဘူးဝိုင်းလေးထဲထည့်ပြီး စိုက်ခင်းထဲချထားပေးပါ... သခွားသီးထဲက ဓာတ်တစ်မျိုးနဲ့ အလူမီနီယမ်နဲ့ ဓာတ်ပြုရာက ထွက်လာတဲ့အနံ့က လူတွေအနံ့ခံကြည့်လို့မရပေမယ့် ပိုးမွှားတွေကိုတော့ ပြေးစေပါတယ်....
ရေကူးကန်သွားခါနီးဖြစ်ဖြစ်... ဘောင်းဘီတိုလေးတွေ ၀တ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါင်တွေမှာရှိနေတတ်တဲ့ ဆယ်လူလိုဒ်အဆီပြင်တွေကို ခဏတာဖုံးကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့နေရာကို သခွားသီးနဲ့ပွတ်တိုက်ပေးပါ... သခွားသီးက အရေပြားကို တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်စေတဲ့အတွက် အဆီပြင်တွေကို ဖုံးကွယ်ပေးထားပါလိမ့်မယ်...
မနက်အိပ်ယာကနိုးလို့ ငြီးစီစီဖြစ်နေတာတွေ ခေါင်းကိုက်နေတတ်တာတွေက တကယ်ကို အနှောက်အယှက်ပါပဲ... အဲဒါမျိုးတွေကို ကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် မအိပ်ခင် သခွားသီးနည်းနည်းလောက်စားပြီးမှအိပ်ပါ... အိပ်ယာကနေ လန်းလန်းဆန်းဆန်း နိုးထနိုင်ပါလိမ့်မယ်...
အရေးကြီးတဲ့ အင်တာဗျုးသွားရခါနီးမှာ ဖိနပ်ကလည်းမတိုက်ရသေးဘူး အချိန်လည်းမရတော့ဘူးဆိုရင် သခွားသီးကိုလှီးပြီး တိုက်လိုက်ပါ... အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ပြောင်လက်တောက်ပတဲ့ ဖိနပ်လေးရပါလိမ့်မယ်...
နေ့လည်စာစားပြီး ငုံဆေးကလည်းကုန်နေလို့ ပါးစပ်နံမှာစိုးနေရင် သခွားသီးတစ်ကွင်းလောက်ကို အာခေါင်မှာကပ်ပြီး တစ်မိနစ်လောက်ငုံထားလိုက်ပါ... အနံ့ဆိုးတွေပျောက်ပြီး ခံတွင်းနံ့သင်းပျံ့စေပါတယ်...
ဘောပင်နဲ့ရေးထားတဲ့ အမှားတွေကိုဖျက်ချင်ပြီဆိုရင် သခွားသီးအခွံပိုင်းနဲ့ ပွတ်တိုက်ပြီးဖျက်လို့ရနိုင်ပါတယ်... ကလေးငယ်ရှိတဲ့မိခင်တွေရေ... နံရံတွေမှာညစ်ပေနေတဲ့ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ပန်းချီလက်ရာတွေကိုလည်း သခွားသီးနဲ့ပွတ်ပြီး ဖျက်လို့ရပါတယ်နော်....
အားလုံးပဲ လိုအပ်ရင်အသုံးဝင်အောင် email ကရတာလေးကို ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်....
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 5:49 PM9comments:
မမမျက်မှန်လေးဆီမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်... တတ်နိုင်သမျှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြစေလိုပါသည်ရှင်...
The two Myanmar Students (Maung Zaw Myo Lwin and Ma Phyo Thida Tun) hadahit and run accident by lorry on the middle of October. Maung Zaw Myo Lwin is studying at ITE and Ma Phyo Thida Tun is an ACCA student from N2P2 Professional Training Centre. Due to the accident, Maung Zaw Myo Lwin has minor injury despite his leg has been broken. He has been discharged from hospitalafew days later.
However, Ma Phyo Thida Tun is having serious and numerous injuries on lower part of her body where she can not move totally. The doctors at Tan Tock Seng Hospital are trying their best to avoid her to be amputed. She has been admitted at Ward 12D, Bed 109 since then. Her brother (alsoastudent) from Malaysia has come to Singapore to
look after her since the accident has taken place.
Yesterday, Ko Zaw Zaw Cho (Ex-RIT member + Myanmar Club member), Ko Thant Zin Myo
(Ex-RIT) and Moh Moh Minn (Ex-RIT) went to hospital and met with Ma Phyo Thidar Tun.
Here are the scopes we are trying to help them:
1. Regarding the insurance claim from Car owner’s company and other law related matters, Ko Zaw Tun (Myanmar Club, VP) and Ko Zaw Zaw Cho are in the process of negotiating. For your information, Maung Zaw Myo Lwin’s hospital bill is about S$20,000 and that of Ma Phyo Thida Tun is about S$ 70,000 as on today. We heard that the hospital doesn’t want to continue her treatment if the bill is not paid. She seems to be in hospital for another one month, at least.
2. Regarding her brother’s visa extension in Singapore, Ko Zaw Zaw Cho will try to request to ICA.
3. Since they are just students and their family has difficulty to support them for long term medication bill, we would like to request help from all Myanmar communities in Singapore to support them as much as we can.
AC No. : 038-84088-6 POSB Saving
Please notify me if you have credited to the above account.
Shwe Zin Ma (Ex-RIT, Ec 2000) -- Phone (93245885)
Zaw Zaw Cho (Myanmar Club + Ex-RIT, Mech 1998) - Phone (92702925)
U Zaw Tun (Myanmar Club + Ex-RIT, Ec 1981) ---- Phone (90105910)
Thant Zin Myo (Ex-RIT, Civil 2003) - Phone (92381646)
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 6:48 PM No comments:
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 8:05 PM3comments:
တစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားစပ်မိတော့ သူကမေးတယ်... PR ကျပြီလားတဲ့... မကျသေးဘူးဆိုလို့ သူကအံ့သြနေတာ... ဒါဆိုနင့်သားလေးက ဘာPassနဲ့နေနေတာလဲတဲ့... အဲဒီPassအကြောင်းလေး ရေးပြချင်တာပါ...
သားသားရဲ့ Pass က Long Term Social Visit Pass ပါ... ICA ကချပေးတာမဟုတ်ပါဘူး... MOM ကပေးထားတာပါ... သားသားကိုရန်ကုန်မှာပြန်မွေးပြီး ပြန်ခေါ်လာတော့ ၀င်ဝင်ချင်း ၁လ stay ရပါတယ်... လူကြီးတွေလိုပဲပေါ့... ကျွန်မတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးက S Pass ဆိုတော့ ICA မှာ Long Term Pass လျှောက်ပေမယ့် မပေးပါဘူး... PR မှရမှာပါတဲ့... အဲဒါနဲ့ Dependent Pass တင်ကြည့်ပါတယ်... သိပ်တော့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးပေါ့... ကျွန်မရဲ့အခြေခံလစာက ၂၅၀၀မှ မပြည့်ပဲကိုး... ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ... Not successful ပါတဲ့... အဲဒီတော့ Appeal Letter တင်ရတော့တာပေါ့... ကံကောင်းတာက လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး Company တစ်ခုတည်းမှာလုပ်နေတာရယ်... ကျွန်မက HR Department မှာလုပ်နေတာရယ်ပါပဲ... Appeal Application အတွက် Cover Letter ကို စိတ်ကြိုက်ရေးခွင့်ရပါတယ်... Boss က နင်ကြိုက်သလိုရေး... လက်မှတ်ထိုးပေးမယ်ဆိုတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့... Employer အနေနဲ့ရေးရတာဆိုတော့ အကြိုက်ပဲလေ... ကိုယ်မရှိရင်ပဲ Company ပိတ်ပစ်ရတော့မလိုကို ရေးပစ်လိုက်တယ်... အဲဒါလည်း Dependent Pass မပေးပါဘူး... Long Term Social Visit Pass လျှောက်ပါ... ဒီစာကို Cover Letter အဖြစ်သုံးပါဆိုပြီး စာပြန်လာပါတယ်... အဲဒါလျှောက်လိုက်တော့ ကျလာပါတယ်... ကျွန်မ S Pass သက်တမ်းရှိသလောက်ရပါတယ်... အဲဒီတော့မှပဲ စိတ်အေးရတော့တာလေ.... ဒါတောင် ကြားထဲမှာ မောရတာတွေက များသား... Appeal တင်ထားတုန်း သားသားရဲ့ Social Visit Pass က ကုန်သွားပါတယ်... E extend တိုးထားတာဆိုတော့ ဘယ်လိုမှထပ်တိုးလို့မရတော့ဘူး.... အဲဒါနဲ့ ရန်ကုန်ကို ခဏပြန်လိုက်ရသေးတယ်လေ... ကျွန်မမှာ ခွင့်ကလည်းမကျန်တော့တာနဲ့ ၄ရက်ပဲနေမယ်... ပြီးရင်ပြန်ခေါ်လာမယ်ဆိုပြီး သားသားအတွက် visa တင်ခဲ့လိုက်တယ်... ကံများဆိုးချင်တော့ ပြန်မယ့်ရက်အထိ visa ကျမလာတာနဲ့ သားသားကို ထားခဲ့ရတာပေါ့.... ဒီကိုရောက်တော့မှ visa ကကျနေပြီတဲ့... စိတ်တိုလိုက်တာ အရမ်းပဲ... အဲဒါနဲ့ စနေနေ့သွား တနင်္ဂနွေပြန်ပြီး သားသားကို ပြန်ခေါ်လာရတော့တာပေါ့... Silk Air ကို လုပ်ကျွေးလိုက်ရတာလေ...
ခုဒီမှာ S Pass နဲ့ လုပ်နေကြသူတွေချင်း လက်ထပ်ကြတာတွေများလာတော့ လိုအပ်ရင် အသုံးဝင်အောင် ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်တွေ့လေးကို မျှဝေပေးတာပါ.......
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 1:27 PM6comments:
၂၀၁၂ကျရင် ကမ္ဘာကြီးပျက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတော့ တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်.... ကင်ဆာရောဂါသည်တစ်ယောက်ကို ၆လပဲခံတော့မယ်ဆိုပြီး သက်တမ်းခန့်မှန်းပေးတာမျိုးလိုပါပဲလားလို့... တိုးတက်လာတဲ့ သိပံပညာရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက ကမ္ဘာကြီးကို နာမကျန်းဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ အားလုံးသိပြီးသားပါပဲ... ခုတော့ နာမကျန်းဖြစ်ရုံမကလို့ နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီတဲ့လား.... လူသားအားလုံးကို သူ့ရင်ခွင်ထဲထည့်ထမ်းထားရတဲ့ မိခင်နဲ့တူသောကမ္ဘာကြီး... သူ.... ပျက်စီးရတော့မယ်တဲ့လား...
၁) ဘယ်သူတွေနဲ့ ရှိနေချင်လဲ ...
ကျွန်မသိပ်ချစ်တဲ့သူတွေ.... ကျွန်မကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ အတူတူ... မွေးရပ်မြေမှာ ရှိနေချင်ပါတယ်...
(၂) ဘာတွေခံစားနေရမလဲ ...
(၃) ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားမလဲ ...
(၄) ဝမ်းနည်းမိမှာက ...
အရင်သွားနှင့်တဲ့ ဖေဖေ့အတွက်.... (နောက်ဆုံးခရီးကို အတူတူသွားချင်တာ)
(၅) ကြောက်လန့်မိတာက ...
(၆) ဆောင်ထားချင်တာက ...
ဘာမှဆောင်ထားချင်တော့ပါဘူး... အဲ... ရေဘူးတော့ဆောင်ထားရမယ်ထင်ပါရဲ့... လူစုံတက်စုံဆိုတော့ ပွားကြမှာလေ...
(၇) ဘာတွေရေးမိမလဲ ..
(၈) တွေးမိတွေးရာ အတွေး ...
သြော်... လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခ... ကမ္ဘာပျက်မှာတောင်ကြိုသိနေရတယ်လို့နော်...
(၉) ဂုဏ်ယူချင်တာက ...
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ငါရှင်သန်ခွင့်ရခဲ့တယ်...
(၁၀) ရှာကြံဖြေသိမ့်မိတာက ...
(၁၁) ကျူးရင့်ချင်တဲ့ ဥဒါန်း ...
ကိုတင်မင်းထက်ရေ... ရေးပြီးပြီ... ဘာတွေရေးမိမှန်းတော့မသိဘူး... ဥဒါန်းကတော့ ကူးချထားတယ်... သဘောကျလို့... :)
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 8:13 PM6comments: